Kyrgyzstan: Adihevitra momba ny Filoha sy ny Parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2018 14:31 GMT
Mbola tsy nohavaozina ny blaogy manokana an'i Edil Baisalov, iray amin'ireo blaogy be mpitsidika indrindra ao Kyrgyzstan, hatramin'ny 4 Desambra 2007. Nidina be ny taham-pahavitrihan'ity blaogy ity rehefa hita fa meloka izy tamin'ny fizarana tao amin'ny blaoginy ny vatom-pifidianana mialohan'ny fifidianana, araka ny niheveran'ireo mpikambana tao amin'ny Kaomity Fioben'ny Fifidianana tao amin'ny Repoblika Kyrgyz azy. Mpikambana tao amin'ny Antoko Sosialy Demokatrika ary kandidà ho solombavambahoaka i Baisalov. Taorian'ilay raharaha nanahirana momba ilay vatom-pifidianana, dia nandositra ny firenena izy araka ny voalazan'ny media teny an-toerana ary milaza ny tsaho fa any Kazakhstan izy ankehitriny no mipetraka.
Na izany aza, lasa nalaza be toy izany koa ny blaogy manokana an'i Elena Skochilo, satria ireo lahatsoratra soratany dia misintona resaka mahaliana maro momba ireo lohahevitra maro mikasika ny politika, toekarena ary ny fiarahamonina eo anivon'ny blaogera ao Kyrgyzstan. Ny resaka farany tao amin'ny blaoginy dia momba ilay vehivavy iray izay, taona maromaro lasa izay, dia nilaza fa ho Filoham-pirenena i Kumanbek Bakiev ary nilaza ihany koa fa ny filoha manaraka aorian'i Bakiev dia ho tovolahy, izay ankehitriny dia mipetraka any amin'ny firenena hafa. Hoy i Elena:
Edil, miverena, mety ho ianao no ho lasa filohanay manaraka!
Manamarika i Nuraika:
Tena ho tsara be raha lasa filoha i Edil. Fa raha ny tena marina, tsy mieritreritra aho fa ho tanteraka izany.
Mizara ny heviny ihany koa i Mr. Carlson:
Na mbola tanora loatra aza i Edil raha ho lasa filoha, tsy midika izany fa tsy dia matihanina sy mahay noho ny filohantsika amin'izao fotoana izao, na eo aza ny elanelan-taona. Fa mialoha izany rehetra izany, tokony hiverina aty an-tanindrazana izy. Io no ampahany mampalahelo indrindra amin'ny resatsika.
Manombok'izao dia hahazo fiara ofisialy ireo mpikambana vaovao voafidy ho ao amin'ny Parlemanta, hoy i Adahan Madumarov, Mpitondra tenin'ny Parlemanta. Ankoatra izany, homena trano ihany koa ireo solombavambahoaka tsy manana toeram-ponenana eto an-drenivohitra. Tsy fmahagaga ny nahatonga ny filazana toy izany hiteraka hatezerana sy tsy fahafahampo teo anivon'ireo blaogera Kyrgyz. Ohatra, milaza i makaroff:
Efa samy manana efitrano fonenana sy trano maro avokoa izao ireo solombavambahoaka rehetra. Ohatra, manana trano 3 i Shadiev, dia toy izany koa i Junusov.
Mieritreritra i Magnetic:
Trano, efitrano fonenana, fiara, solika, finday, fivezivezenan an-tany hafa noho ny asa… Mandeha any amin'ny sekoly sy oniversite lafo sarany ny zanak'izy ireo, ary alefa mianatra any an-dafy. Inona no ilàntsika solombavambahoaka toy izany? Lazao ahy, inona no nataon'izy ireo ho an'ny vahoakany sy ho an'ny fireneny?
Manontany i Kovboi:
Ahoana no tsy hanana trano ireo solombavambahoaka mandany vola be amin'ny fampielezankevitra ireo? Hadalàna tsy misy dikany mihitsy.